Samee iPhone Video Muqaal la Photos ka iPhone oo Music
> Resource > iPhone > Samee iPhone Video Muqaal la Photos ka iPhone
Sababtoo ah iPhone aad la aado meel kasta, waxaad mar walba diyaar u tahay inay qabsadaan sawiro iyo videos rikoorka ugu daqiiqad kasta. Thanks to the-xallinta sare ee iPhone (gaar ahaan iPhone 4), wax kasta oo aad aragto iyo la sameeyo iPhone u muuqataa mid cajiib ah, sababta aan isugu daro sawiro cajiib ah iyo video clips galay video weyn-raadinta slideshow , si ay u raaxaystaan ​​ama ay la wadaagto aad iPhone si fudud iyo qosol.
Wondershare DVD Muqaal dhise waa kii a slideshow sawir weyn u Windows iyo Mac (Mountain Libaaxa ka mid ahaa), waxaa kaa caawin kara si loogu badalo photos iyo video clips kala duwan oo aad (MP4, MOV, wmv, AVI ...) si video playable on iPhone. Iyadoo Hababka badan ay & saameynta kala guurka iyo qalabka tafatirka dhisay-in, ayaa marna si fudud u leedahay in videos iPhone kartoo.
Tilmaan-bixiyahan waxa ku jira kuwa soo socda laba qaybood, qayb ka mid idin ​​bari doonaa in ay soo bixi sawiro ka iPhone , ka dibna qaybta labaad idinku hanuunin ku saabsan sida loo sameeyo iPhone video slideshow la sawiro & videos ka iPhone, iyo daawo iPhone.
Qaybta 1aad: Sida loo sawiro ka iPhone wareejiyo PC
Waxaad si fudud u Photos ka iPhone wareejin karaa in aad PC, habka uu yahay mid aad la mid ah sida aad u samayn ee Mac OS X 9Mac 10.8 ka mid ah).
Talaabada 1: plugin aad iPhone in aad PC
Talaabada 2: Open "My Computer"
Talaabada 3: Hel iPhone, waxa muuqan doonaa sida camera kasta oo kale oo lahaa
Talaabada 4: iPhone Open si aad u ogaato Photos
Talaabada 5: Dooro sawirada aad rabto in aad nuqul ka si aad u computer iyo nuqul / iyaga paste galay meesha la doonayo in aad kombuutarka
Laakiin haddii aad rabto in lagu wareejiyo video aan loo eegayn haddii uu ku qabtay adigu ama ma, ma aha mid fudud sida sawiro wareejinta, waxaad u tagi kartaa software sida Wondershare ka MobileGo for iOS ama Wondershare MobileGo for iOS (Mac) caawimaad.
Qeybta 2: Sida loo sameeyo video slideshow iyo daawan on iPhone
Marka aad sawiro laga soo wareejiyay iPhone in computer, ka dibna waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in loogu badalo photos in video slideshow music ka dibna u geliyaan in ay iPhone.
Talaabooyinka sahal in la sameeyo Muqaal u iPhone:
Tallaabo 1: Ku rakib iPhone gaare slideshow iyo warbaahinta dejinta.
Tallaabo 2: Ku dar Hababka sawir u slideshow iPhone.
Talaabada 3: shakhsiyeeyo aad slideshow iPhone.
Talaabada 4: Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo abuuro slideshow u iPhone.
Upload Muqaal Video inay iPhone:
Tallaabo 1: Ku rakib Lugood. Haddii aadan u leeyihiin, download halkan: http://www.apple.com/itunes/download/
Talaabada 2: Orod Lugood iyo abuuro playlist ah (guji file abuuro liiska). Markaas jiidi aad Lugood slideshow video in playlist this.
Talaabada 3: nidaameed iPhone Muqaal video in Lugood adigoo gujinaya Codso button ee koonaha midig.
Ka dib markii loo wareejiyay iPhone, aad ku raaxaysan karaan slideshow ka abuuray mar kasta iyo meel kasta.